Vondron-kintana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Galaksia)
ny Galaksia M51, galaksia olanolana iray
Ny vondron-kintana dia toerana ahitana kintana maro dia maro izay nifanakaiky tamin'ny alalan'ny hery vokatry ny lanja (gravity). Tsy kintana irery akory no misy ao amin'ny vondron-kintana fa ahitana, vovo-kintana, etona, plasma, ary zavatra mainty izay tsy hita maso. Ny isan'ny kintana ao amina vondron-kintana iray dia eo amin'ny folo tapitrisa hatramin'ny roa ambin'ny folo tiriliôna (1012), izay mihodina manodidina ivon-danja iombonana.
Refesina amin'ny taon-kazavana ny savaivon'ny vondron-kintana iray, eo amin'ny iray hetsy eo ho eo ny savaivon'ny ankamaroan'izy ireo ; ny halaviran'ny vondron-kintana roa dia isaina amin'ny taon-kazavana aman-tapitrisany.
Ny zavatra mainty dia miseho ho 90% ny lanjan'ny vondron-kintan arehetra, mbola vitsy ny fampahalalana ananana mikasika ilay zavatra mainty. Eo anivon'ny ankamaroan'ny vondron-kintana dia ahitana lavaka mainty lehibe izay mamotika ny kintana mandalo eo akaikiny na midona aminy.
((fr)) Étude sur les galaxies elliptiques, spirales et irrégulières
((fr)) Les galaxies et l'univers, sur le site de l'Université libre de Bruxelles
((fr)) Étoiles et galaxies, sur le site du Centre de recherche astronomique de Lyon
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vondron-kintana&oldid=767875"
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:04 ity pejy ity.